Allgedo.com » DHAGAYSO AlShabaab: Puntland waxaan ka dilnay 30 askari anagana afar ayaa naga dhimatay
Home » News, Waraysi »
DHAGAYSO AlShabaab: Puntland waxaan ka dilnay 30 askari anagana afar ayaa naga dhimatay
Print here| By: allgedo.com: Thursday, December 6, 2012 // 1 Jawaab
Xarakada Alshabaab ayaa ka hadashay dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamadooda iyo kuwa Maamul Goboleedka Puntland Soomaaliya,kaasoo ka dhacay Buuraleyda Galgala ee Gobolka Bari.
Afayeenka Alshabaab ee dhinaca Howlgalada Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta Alshabaab ku sheegay in ay dagaal xoogan la galeen Puntland, isagoo sheegay inay khasaaro lixaad leh gaarsiiyeen.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Mujaahidiinta Alshabaab ay weerar xoogan ku qaadeen Saldhig ay ciidamada Puntland ku lahaayeen meel u dhow Buuraha Galgala ee Gobolka Bari, uwxuuna sheegay inay ku dileen weerarkaasi ciidamo ak tirsan Maamulka Puntland Somalia.
Afayeenka Alshabaab ayaa shaaciyay inay dileen 8 askari oo ka tirsan Ciidamada Pnntland, sidoo kalana ay Miino ku dileen 12 kale oo isla ciidamada ah, isagoo qiray in ciidamada ay miinada ku dileen ay ku jireen gurmad ay u fidinayeen kuwa ay dagaalka kula jireen.
Alshabaab afayeenka u hadlay ayaa guul aan la aragt oo la maqala sheegay inay ka gaareen dagaalkii shalay ay la galeen Ciidamada Maamulkaasi,isagoo sheegay inay mujaahidiinta Alshabaab ay ku jiraan Buuraha Galgala.
Maamulka Puntland Somalia ayaa sheegay inay iska difaaceen weerar kaga yimid Alshabaab, waxaana ay hadalkooda ku dareen inay khasaaro gaarsiiyeen Ragii soo weeraray.
Waxaana ay soo bandhigeen meydka ila shan nin oo ay ku sheegeen in ay ahaayeen ciidamadii Shabaab ee weerarka kusoo qaaday.
Riix Halkan si ad codka Shabaab udhagaysato
1 Jawaab " DHAGAYSO AlShabaab: Puntland waxaan ka dilnay 30 askari anagana afar ayaa naga dhimatay "
Xilli uu sheegay inay isagu iyo Saraakiil kale ku sugnaayeen Xaruunta Degmada uu qaraxu dhacay, ha yeeshee uu si dirqi leh uu uga baxsaday sida uu hadalka u dhigay Sheekh C/Casiis Abuu Muscab.